लुम्बिनी प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन आज, कस्तो छ, अंकगणित ?
बुटवल १७ जेठ । लुम्बिनी प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन आज हुँदैछ । रिक्त एक राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि आज निर्वाचन हुन लागेको र सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
दाङको घोराहीस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्र परिसरमा आज बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ३ बजेसम्म मतदान हुने छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरका अनुसार तीन वटा मतदान केन्द्र रहेका छन् । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ मतदान केन्द्रमध्ये ‘ग’ मतदान केन्द्रमा कोरोना संक्रमित भएका जनप्रतिनिधिका लागि मतदान सक्नेछन् । राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता रहेने व्यवस्था छ ।
मतदान सकिएलगत्तै मतगणनाको व्यवस्थापन मिलाइएको र आजै मतपरिणाम आउने बताइएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट २०७४ सालमा निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेर एमालेबाट उम्मेदवार बनेका छन् । उनलाई एमाले र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले समर्थन रहेको छ ।
यस्तै विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दीर्घनाराय पाण्डे उम्मेदवार छन् । उनलाई काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादीको उपेन्द्र यादव पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले समर्थन गरेका छन् । उनी हालै नेकपा एमाले छाडेर नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए ।
यस्तो छ, अंकगणित !
प्रदेशसभामा काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, पछिल्लो निणर्य समेत गरी जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद छन् । प्रदेशमा काँग्रेस एक्लैको मतभार ९ सय १२, माओवादी केन्द्रको पनि समान ९ सय १२, जसपा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहको ९६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ४८ गरी विपक्षी गठबन्धनसँग कुल १ हजार ९६८ मत छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कुल १०९ स्थानीय तह छन्। त्यसमध्ये पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार शर्माको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । स्थानीय तहमा काँग्रेसका ६३, माओवादीका ३६, जसपाका १३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ५ जतप्रतिनिधि छन्। उनीहरू एकजनाको मतभार १८ गणना हुन्छ। विपक्षी गठबन्धनको स्थानीय तहमा १ हजार ९९८ मत छ । प्रदेश र स्थानीय तह गरी विपक्षी गठबन्धनसँग कुल ३ हजार ९ सय ८४ मत छ। एमाले भित्रको नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गर्ने र स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले पनि मत दिने विपक्षी गठबन्धनले आश गरेको छ।
प्रदेशसभामा एमालेका ३८ सांसद छन् । उनीहरूको १ हजार ८ सय २४ मतभार छ। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निणर्यसँगै जसपाको ठाकुर पक्षका चार जना मन्त्रीको मतभार १९० पनि थपिएको छ। योसहित एमालेको प्रदेशसभाको मतभार २ हजार १४ पुग्छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहतर्फका २१७ मध्ये एमालेका ९४ नगर प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छन्। उनीहरूको मतभार १ हजार ६ सय ९२ छ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय तहमा आफ्ना ६ जना जनप्रतिनिधि रहेको राजपा भित्रको ठाकुर पक्षको दाबी छ। उनीहरूको मतभार १०८ हुन्छ। लुम्बिनीमा स्वतन्त्रका ४ जना, राप्रपाका २ जना र नयाँ शक्तिका एकजना जनप्रतिनिधि छन्।
यी सबैको योगफल १२६ हुन्छ। एमाले, जसपा ठाकुर समूह, राप्रपा, स्वतन्त्र, नयाँ शक्ति सबैको स्थानीय तहमा योगफल १ हजार ९२६ हुने गर्छ। प्रदेश सभाको २०१४ र स्थानीय तहको १९२६ समेत गरि कुल योगफल ३ हजार ९ सय ४० पुग्ने गर्छ। यो विपक्षी गठबन्धन भन्दा कम नै हो। जुन बहुमतको लागि प्रयाप्त छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नेपाल समूहले वागमतीमा जस्तै फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना बढेको छ । एमाले नेपाल समूहले विपक्षी गठबन्धलाई सहयोग गरे नेपाली काँग्रेससहित विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार पाण्डे विजयी हुने छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १७, २०७८, ०७:३५:००